Kushone 3 wabantu ebebeqwala intaba ende kunazo zonke | News24
Kushone 3 wabantu ebebeqwala intaba ende kunazo zonke
Kathmandu – Kushone abaqwali bentaba abathathu eMount Everest, oyedwa wanyamalala ngempelasonto ebimatasa kakhulu kule ntaba ende kunazo zonke emhlabeni, kusho izikhulu nabahleli bohambo ngoMsombuluko.
OwaseMelika ushonele ngasesicongweni, kwaduka owaseNdiya esebuyela emuva kulandela ukufika ngempumelelo esicongweni, kusho abahleli bohambo.
URoland Yearwood, 50, waseGeorgiana, e-Alabama, ushone ngeSonto kodwa imininingwane egcwele ibingakatholakali, kusho uMurari Sharma we-Everest Parivar Expedition Agency, okuyinkampani ezinze eKathmandu, enhlokodolobha yaseNepal.
OwaseNdiya, uRavi Kumar, uxinwe ukugula ngesikhathi esehla entabeni ngoMgqibelo, akafikanga enkanjini eseduzane, kusho uThupden Sherpa we-Arun Treks and Expedition.
OLUNYE UDABA: Kushone izithandani zizitika ngocasni esidlangalaleni
UKumar ufike phezulu entabeni – nalowo abehamba naye - abantu abaningi sebehambile nokwenze bangaluthola usizo ngesikhathi exinwa ukugula esebuyela ezansi, kanti kumanje akaziwa, kusho uSherpa.
Kushone omunye waseSlovakia, uVladimir Strba, 50, e-Everest ngeSonto, kusho isikhulu soMnyango wezokuVakasha uGyanendra Shrestha ngoMsombuluko.
Omunye oshonile nguFrancesco Enrico Marchetti, 54, ongowase-Australia, eQueensland, ngokusho kwephephandaba iHimalayan Times. Eminye imininingwane ibingakatholakali.
Isibalo sabantu asebeshonile kusukela ngoMashi, bahlanu, kanti uyedwa ongakatholakali.